Himalaya Dainik » आजको विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कती हेर्नुहोस्
आजको विदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कती हेर्नुहोस्
काठमाडौं ७ साउन । आज(मंगलबार) युके पाउण्ड बाहेक सबै देशको भाउ बढेको छ । आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रिदर १३७ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ।
भने अमेरीकी डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको छ। त्यसैगरी मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ७४ पैसा, बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ।
बहराईन दिनार एकको खरिददर २९१ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९३ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ।त्यस्तै युएई दिराम एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ।त्यस्तैगरी कुवेती दिनार एकको खरिददर ३६१ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३६३ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस !!
रविको छवि ‘मिनी अख्तियार’ जस्तै थियो, घूस खानुअघि हरेक भ्रष्टहरुको दिमागमा रविको चित्र आउँथ्यो
नारायण गाउँले– अनुसन्धानपछि अस्मिता कार्की निर्दोष देखिइन् भने के होला ? अनुसन्धानले अझ उनलाई नै ‘पीड़ित’ देखायो भने के होला ? ‘निर्दोष देखिए छुटिहाल्छिन् नि’ भन्ने तपाईंको वाक्य कति हचुवा र असंवेदनशील छ भन्ने शायद तपाईं आफैलाई थाहा नहुनुपर्छ ।
थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने किन ? छुटेपछि भिडियो एडिट गर्छन् भनेर ? भाग्छन् भनेर ? बयान लिन बोलाउँदा आउँदैनन् भनेर ? या व्यक्तिगत रिसिबी साध्न भनेर ?हो, भीड़बाट कानुन निर्देशित हुनुहुँदैन । तर कानुन पहुँचमा हुनेहरूको स्वार्थले पनि प्रेरित हुनुहुँदैन । कानुन व्यक्तिपिच्छे फ़रक हुनुहुँदैन ।
प्रकाशित मिति ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार १२:२२